VR180 सिर्जनाकर्ता, Google लिनक्स मा VR भिडियो सम्पादन गर्न सजिलो बनाउन को लागी प्रयास गर्दछ Ubunlog
VR180 सिर्जनाकर्ता, gnu gnu / लिनक्स मा VR भिडियो सम्पादन गर्न सजिलो बनाउन को लागी प्रयास गर्दछ
अर्को लेखमा हामी VR180 सिर्जनाकर्तालाई हेर्नेछौं। यो उपकरणले हामीलाई Vnu भिडियोहरू Gnu / Linux मा एक साधारण तरिकामा काम गर्न अनुमति दिनेछ। गुगलले यस खुला स्रोत उपकरण जारी गर्‍यो सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई मद्दत गर्न। यो एक हो म्याकोस र गन्नू / लिनक्सको लागि VR भिडियो रूपान्तरण उपकरण। भिडियो रेकर्डि and र प्लेब्याकको साथ अनुभव भएका विभिन्न ब्रान्डहरूको समर्थन र सहयोग लिनुहोस्, जस्तै लेनोभो र एलजी। यसको लक्ष्य यस नयाँ भर्चुअल रियालिटी प्रणालीसँग मिल्दो क्यामेराको लागि बजारमा बढ्ने हो।
VR180 सिर्जनाकर्ता एक उपकरण हो जुन लक्ष्य राख्दछ कि यसलाई मानिसहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि १ degree० डिग्री र degree 180० डिग्री उपकरणहरूमा लिइएको भिडियो शटहरू सम्पादन गर्नुहोस्। VR भिडियो सम्पादन गर्न अक्सर जटिलताहरू हुन्छन्। त्यसैले उपभोक्ताहरू र सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको लागि विशेष उच्च-अन्त प्लेटफर्म बाहेक अरू केहि पनि VR सम्पादन गर्न सजिलो बनाउने ढाँचा फ्रिम्ट गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
यो उपकरण हो जुन क्यामेराको भिडियोसँग काम गर्दछ जुन यो ढाँचा प्रयोग गर्दछ। लक्ष्य भनेको सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई अनुमति दिनु हो भर्चुअल वास्तविकतामा फोटो र भिडियोहरू क्याप्चर गर्नुहोस्। यो पनि उद्देश्य छ कि तिनीहरू कुनै पनि समस्या बिना एक 2D दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ।
विशेष रूपमा, यस प्रविधि प्रयोग गरेर, प्रयोगकर्ताले VR चश्मा लगाउन सक्छन् छविहरू कब्जा गर्नका लागि। तपाईले फोटोहरू वा भिडियोहरू कम्प्युटर वा मोबाइल स्क्रिनमा पनि अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ।
गुगललाई, विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय भिडियो साझेदारी प्लेटफर्मको मालिकको रूपमा र एक मोबाइल अपरेटिंग प्रणालीको मालिकको रूपमा जुन प्रदान गर्दछ भर्चुअल वास्तविकता अनुभव जस्तै गुगल गत्ता, यो यो ठूलो ढाँचा को लागी उहाँलाई यो ढाँचा अगाडि जारी छ।
तिनीहरू गुगलमा के भन्छन् अनुसार, यस डेस्कटप उपकरणले कसैलाई अवस्थित उपकरणहरूसँग VR180 छविहरू सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ। वीआर १180० क्यामेराले सिर्जनाकर्ताहरूलाई इमर्सिभ, तीन आयामिक फोटो र भिडियोहरू खिच्न अनुमति दिन्छ, सस्तो क्यामेराहरू प्रयोग गरेर जुन तपाईंको जेबमा फिट हुन पर्याप्त छ।
VR180 निर्माता एक हो अपेक्षाकृत आधारभूत उपकरण भिडियो रूपान्तरणको आरोपमा। त्यसोभए यदि कसैले मल्टि-ट्र्याक, गैर-रैखिक भिडियो सम्पादक फेला पार्न आशा गर्दछ भने, तिनीहरू गलत प्रोग्राममा छन्।
VR180 सिर्जनाकर्ता प्रयोग गरेर तपाईं सक्नुहुन्छ VR क्यामेराबाट भिडियो क्लिपहरू आयात र रूपान्तरण गर्नुहोस् एक अधिक बहुमुखी भिडियो फाईलमा जुन तपाईं डेस्कटप भिडियो सम्पादकले खोल्न र सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ Avidemux, Adobe Premiere, Kdenlive, इत्यादि।
उपकरणसँग एक छ सेटिंग्स को केहि मात्रा। तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर, तपाईं रूपान्तरण गरिएको फाइलको गुणवत्ता, रूपरेखा र दृश्य क्षेत्र नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
रूपान्तरण पछि, उपकरण को प्रकार्य 'क्लिक पछि समाप्त हुँदैन।रूपान्तरण गर्नुहोस्'। हामीले रूपान्तरण गर्न चाहेको क्लिपहरू सम्पादन गरिसकेपछि हामी चाहन्छौं तिनीहरूलाई एक VR अनुकूल ढाँचामा प्रकाशित गर्नुहोस्। यो गर्नका लागि तपाईको भिडियो फाइलहरू कार्यक्रमको कार्यक्षेत्रमा फर्काउनुहोस्। यस पटक विकल्प छनौट गर्दै 'प्रकाशनका लागि तयारी गर्नुहोस्', गृह स्क्रिनमा फेला पर्‍यो।
स्क्रिनबाट जुन हामी हेर्नेछौं हामी फर्कन सक्षम हुनेछौं सबै VR संगत मेटाडाटा थप्नुहोस् र कन्फिगर गर्नुहोस्। यो VR180 मेटाडेटा हो जसले हाम्रो भिडियो क्लिपलाई यूट्यूब र गुगल कार्डबोर्डमा सही प्रदर्शन गर्न अनुमति दिनेछ।
डाउनलोड VR180 निर्माता
VR180 क्रिएटर प्रोग्राम प्रयोग गर्न चाहने उबन्टु प्रयोगकर्ताहरूले केही चीजहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ।
उपकरण स्थापना गर्न libgconf-२. package प्याकेज आवश्यक छ प्रणाली मा, कम्तिमा यो मलाई सोधेको छ। हामी एउटा टर्मिनल (Ctrl + Alt + T) खोल्न सक्छौं र यसलाई स्थापित गर्न यो कमाण्ड चलाउन सक्छौं:
La प्रोग्राम डाउनलोड बाट बाहिर गर्न सकिन्छ वेब पृष्ठ.
अनुप्रयोग Gnu / Linux को लागि VR180 सिर्जनाकर्ता बाइनरीको रूपमा प्रदान गरिएको छ। यसलाई चलाउन प्याकेज डाउनलोड गर्नुहोस्। सामग्री निकाल्नुहोस् र यसमा डबल क्लिक गरेर समाप्त गर्नुहोस् 'VR180 निर्माता' फाइल चलाउनुहोस् अनुप्रयोग सुरु गर्न।
यो स्पष्ट छ कि यस उपकरणको साथ, गुगल अन्ततः यसको नयाँ ढाँचा बन्द गर्न कोशिस गर्दैछ। तिनीहरू सिर्जनाकर्ताका लागि उनीहरूको ढाँचामा रेकर्ड गरिएका भिडियोहरू सम्पादन गर्न सजिलो बनाउन कोशिस गर्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » VR180 सिर्जनाकर्ता, gnu gnu / लिनक्स मा VR भिडियो सम्पादन गर्न सजिलो बनाउन को लागी प्रयास गर्दछ
उबन्टुको साथ हाम्रो सर्वरमा गिटलाब कसरी स्थापना गर्ने